बाइबल प्रार्थना गर्दा हामी आफ्नो हतियार ग | Apg29
वा हामी unbiblical सोध्न कि सबै भन्दा साधारण तरिका हí
जब येशूले कृपा र दया लागि परमेश्वरले सोध्नुभयो जब उहाँ स्वर्गमा उहाँको आँखा उठाएर त कर कलेक्टर वार्ता। किन येशूले विस्तार गरे? यसलाई खुला आँखाले प्रार्थना गर्न प्रयोग किनभने आकाश गर्न बन्द!
का स्थापना तुरुन्तै गरौं:
त्यहाँ तिनीहरूले नतमस्तक प्रार्थना कुनै बाइबलीय उदाहरण हो, न त त्यहाँ तिनीहरूले प्रार्थनामा आफ्नो आँखा बन्द कुनै पनि उदाहरण हो! त्यसैले जहाँ तपाईँले प्रार्थना गर्दा तपाईंले आफ्नो हात लिनुहोस् र आफ्नो आँखा बन्द गर्नुपर्छ भनेर गरिएको छ? हो, यो बाइबल बाट छैन!
कसरी बाइबल मा येशूले?
यूहन्ना 11:41। त्यसपछि तिनीहरूले टाढा मरेका मानिस राख्नु ठाउँमा देखि पत्थर लिए। र येशूले आफ्ना आँखा उठाएको र भन्नुभयो: पिता, म तपाईंलाई धन्यवाद मलाई सुनेका छ।
येशूले आफ्नो बुबाको धन्यवाद, त्यो आफ्नो Gaze उठाएर। उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो खुला आँखा!
त्यहाँ येशूले bönesätt बारेमा यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तकका थप एक उदाहरण हो:
यूहन्ना 17: 1st त्यसपछि येशूले spake, र स्वर्गमा आफ्नो आँखा उठाएर भने, बुबा घण्टा आएको छ। महिमा आफ्नो छोरा, आफ्नो छोरा पनि तिमीलाई महिमा गर्न सक्छ भन्ने:
उहाँले प्रार्थना गर्दा येशूले स्वर्गमा तिर आफ्नो आँखा उठायो। यसरी हामी आफ्नो आँखा खुला संग प्रार्थना गर्न बाइबलीय छ कि स्पष्ट देख्न! त्यसैले किन बाइबलीय तरिका मा प्रार्थना गर्न प्रयास? तपाईं प्रार्थना अर्को समय, आकाश आफ्नो आँखा उचाल्न! बाटो येशूले प्रार्थना!
येशूले सधैं यति पनि रोटी, स्वर्ग आँखा उठाएर:
मत्ती 14:19। त्यसपछि उहाँले घाँस तल बस्न मानिसहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। र त्यो पाँच वटा रोटी र दुई माछाहरू लिए, र स्वर्गमा हेर्दै , र आशिष् र रोटी भङ्ग, र चेलाहरू र मानिसहरूलाई चेलाहरूले तिनीहरूलाई दिनुभयो।
गरेको अर्को उदाहरण हेरौं।
लूका 18:13। तर कर कलेक्टर टाढा उभिए र पनि थियो आफ्नो आँखा उठाउनु परमेश्वरले मलाई दयालु पापी हुन, भन्दै, स्वर्ग, तर आफ्नो स्तन हरायो।
1 तिमो 2: आठौं म त्यसैले मानिसहरू जताततै गर्नुपर्छ चाहनुहुन्छ प्रार्थना र पवित्र हात उचाली, क्रोध र शंका बिना।
पावलले तिनीहरूलाई उठाएर हातले प्रार्थना गर्न चाहन्छु। उहाँले clasped बारेमा केही भन्छन्। यो कारण यो प्रार्थना गर्न बाटो खडा हात छ vanligate छ। तर एक आफ्नो हात स्न्याप गर्नुपर्छ भनेर परम्परा कहाँ? होइन, यसलाई हरेक मामला मा बाइबलबाट छ।
परमेश्वरले फरक तरिकामा उहाँको अप खोल्छ तपाईं आफ्नो हात उचाल्न जब उनि आफ्नो हात, जोडेको जोडेको वा आफ्नो pockets मा हातले हुनेछ भने।
यो आफैलाई प्रयास र तपाईंले यसलाई कस्तो महसुस आफैलाई लागि पत्ता लगाउन छौँ।
तिनीहरूले प्रार्थना गर्दा तिनीहरूले आफ्नो हात उठाउनु भनेर सूचना। साथै "... पवित्र हात माथि प्रार्थना र लिफ्ट ...", तिनीहरूले त्यसो भनेर टिप्पणी सबैतिर । त्यसैले यो एक साधारण bönesätt थियो।
उठाएको हात यो पल को एक नयाँ आविष्कार छैन। यो पुरानो नियममा यसको बारेमा भन्छन्।
1 राजा 8:54: "। सुलेमान यी शब्दहरू प्रार्थना र कल प्रभु मा समाप्त भएको थियो, त्यो आफ्नो हात आकाश गर्न उठाएर साथ उहाँले आफ्नो घुँडामा भएको थियो जहाँ परमप्रभु, वेदी देखि गुलाब"
भजन 63: 4: "म लामो म बाँच्न जस्तै, आफ्नो नाम मा मेरो हात माथि हुनेछन् दिनुहुनेछ।"
भजन 141: 2: "साँझ बलिदानको रूपमा मेरो हात माथि उठाने, मेरो प्रार्थना तपाईंले पहिले धूप जस्तै मान्य होस्।"
विलाप 3:41: "! हामीलाई स्वर्गमा परमेश्वरको हाम्रो हृदय र हाम्रो हात उचाल्न गरौं"
पछिल्लो बाइबल उद्धरण, हामी पाठ्यक्रम हाम्रो हृदय त्यहाँ हामी परमेश्वरको हाम्रो हात उचाल्न जब हुनेछ हेर्नुहोस्।
बाइबल त्यसपछि हामी उहाँलाई प्रार्थना गर्दा परमेश्वरको हाम्रो हात र आँखा उचाल्न सक्छ, हामीलाई सिकाउँछ। यो बाइबलीय तरिका हो।